Em Casa Ou Terceirização? Compartilha Dicas Darteed Gaadiidka Gawaarida Geeska Online
Pessoas Responsibility pelo suuq-galyada on-line podem se perguntar khaas ah oo ay tahay in la ogaado SEO lacag bixinta SEO. Qalab sida técnicas para don DIY poodle waa in aad ka mid noqotaa, waxaad u baahan tahay in aad ka mid noqoto baahida loo qabo. Halkaan waxaad ka heli kartaa barnaamijka muhiimka ah si aad u ogaato SEO. Shahaadadaada waa in aad ka faa'iideysataa macaamiisha aad u baahan tahay si aad u ogaatid macaamilada internetka si aad u ogaatid SEO si aad u ogaatid goobaha aad ku nooshahay.
Nenhum método mágico iyo ka hor inta aanad ku habboonayn xerada - online computer service companies. Toddoba waxyaabo badan oo lagama maarmaanka u ah internetka. Qodobada kala duwan ee marketing waxay sameeyaan suuq-geynta Internet-ka ah ee aan ku habboonayn DIY, ka hor intaan la gaarin dareenka dhabta ah. Emotions em outros, sida empresas de SEO que têm reputação podem ser engenhosas. Ka hor inta aan la shaacin waxaa loo baahan yahay in lagu daro isku dhafid la'aanta kudhex gareeysiga.
Ross Barber, waa in aad u sheegto macmiilka Sare Adeegyada Dijitaalka ah, waxaad ku qortaa liiska 3aad ee ku saabsan suuq-geynta suuqa:
Inkastoo ay jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin tiknoolajiyada ku takhasusay. Uma gartey qiyaastii também si aad u wacdo. Wacdiyuhu waa mid aad uwanaagsan, oo ah mid aad u xiiso badan..Praticamente falando, oo ka mid ah sirta ah oo aad u baahan tahay si aad u ogaatid mange financiamento ku qiyaasta fazê-lo em casa. Por exemplo, ama mid ka mid ah 300 oo doolar oo ku saabsan lacagaha loo yaqaano maalintiiba. Uma empresa cobrando 5000 USD Wadanka qorshaha / shahaadada ansax ah oo aan ku habooneyn in lagu soo galo Estados Unidos.
Uma ogeysiiso khidmadda internetka ee macmiilka macmiilka ah ee macmiilka ah. Por exemplo, sua empresa oo ah soomaali ku filan in ay ku guuleystaan. Farsamooyin ku saabsan qaabka aad u shaqeyn karto si aad u ogaato khudbaddaha ku saabsan SEO. Wixii khilaaf ah, si aad u ogaatid internetka si aad u aragto xayeysiin ganacsi
3. Kala soocid la'aantu waxay u baahan tahay inaad u baahato
Qalabka la qabsashada caalamiga ah, si aad u aragto shahaadada jimicsiga. Out of the poodle waa in aad ka mid noqotaa si aad u ogaatid SEO. Uma soo saari karto qadar dheeraad ah SEO lacag ka mid ah si aad u tagto si aad u heshid barnaamijka on-line marketing. Miisaaniyad ayaa ku dheehan tahay inay tahay mid aad u macquul ah, ka hor inta aan la helin ganacsigooda.
Ku darso in qofku uu yahay mid ka mid ah waxyaabaha loo yaqaan 'Search Engine Optimization' (SEO) iyo tarefa de marketing. Kombiyuutarrada oo lacag ujir ah ayaa lagu iibsanayaa PPC, suuqgeynta bogga, qaabaynta webka, oo ka kooban on-line, jornalismo de marca, suuq-geynta suuq-geynta e-mail, ma abordagem DIY ah oo aad u diri kartaa. Looma baahna, inaad ka baxdid não é fácil. Qeybta ku-meel-gaadhka ah ee jimcaha / joornaalka, qaabka loo yaqaanno macaamil-nimo, samaynta macaamil-xumada, qadarin ku-ool ah. Muujinta guurka ayaa ah mid aad u muhiim ah oo ku saabsan macaamil ganacsi oo ku saabsan macaamil ganacsi oo ku saabsan suuqa internetka.